Tiine TwelveSouth MagicBridge tinogona kuisa pamwechete iyo yeMagetsi Ikhibhodi uye iyo Trackpad 2 muchidimbu chimwe | Ndinobva mac
Tiine TwelveSouth MagicBridge tinogona kuisa pamwechete iyo yeMicrosoft Keyboard uye neTrackpad 2 muchidimbu chimwe
Ignacio Sala | | Accessories
Vashandisi veApple vasina kukosha kwekugara vachipinda manhamba muchikumbiro sarudza iyo YeMicrosoft Keyboard pamwe chete neMagic Mouse kana Trackpad. Chizvarwa chekutanga chemidziyo iyi, iyo yanga iri pamusika kwemakore akawanda ichishanda sezuva rekutanga, inogona kubatanidzwa nekuda kweMagicWand, chishongedzo kubva kumugadziri TwelveSouth, umo Apple Keyborad neMagic Mouse zvakabatanidzwa mune chidimbu chimwe chete. Uku kuwana kunowanikwa kuAmazon kungori pasi pemakumi maviri emaeuro. Vakomana vanobva gumi nevaviri South vakanonoka kuvhura chizvarwa chechipiri cheichi chinowanikwa, zvishongedzo izvo zvinongoshanda chete kuMicrosoft Keyboard uye yechipiri chizvarwa Magic Trackpad, chishandiso icho Apple chakavandudza zvishoma kupfuura gore rapfuura.
Zvinotaridza kuti zvese zvine chekuita neApple accessories zveMac zvakakomberedzwa nharaunda yekunonoka kusingawanzo. Kusiya kukoshesa wega padivi, MagicBridge ndiyo nyowani yeiyi nyowani nyowani iyo inobvumidza iyo Magic Keyborad 2 uye iyo Magic Trackpad 2 kubva kuApple kuti ibatanidzwe mune imwechete block, kutipa imwe nzvimbo yakashandiswa pane tafura yedu yebasa. Iyo MagicBridge inogadzirwa nechena polycarbonate. Mukati medu tinowana akateedzana ezvimire zvesilicone kuona kuti zvishandiso zviri mukati hazvifambe uchizvishandisa, kunyanya iyo keyboard.
Iwo madoko ekuchaja zvese zvishandiso anofumurwa, sekushanduka kwemidziyo, saka hatizofanirwe kubvarura chiringuito chose pese patinomanikidzwa kubhadharisa chimwe kana zvese zviri zviviri zvishandiso. iyo MagicBridge yakagadzirirwa vese kuruboshwe uye kurudyi ruoko kuitira kuti tikwanise kuisa iyo Magic Trackpad zvese kuruboshwe uye kurudyi kwekhibhodi. Izvi zvinowanika kuburikidza newebhusaiti ye Gumi nemaviriSouth uye Amazon yeUnited States ne $ 34,99.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Tiine TwelveSouth MagicBridge tinogona kuisa pamwechete iyo yeMicrosoft Keyboard uye neTrackpad 2 muchidimbu chimwe
Wilson vega akadaro
Ruzivo rwakanaka kwazvo, maita basa
Pindura kuna Wilson Vega
Zvinodhura zvakanyanya kuti Apple igadzire yakawedzera isina waya keyboard ……
Ndine maonero akafanana. Ndichine iyo tambo imwe (yangu yechitatu keyboard yakafanana) nekuti ini ndinoshandisa iyo yakawanda manhamba uye ini ndinoramba kushandisa iyo mini keyboard iyo iyo Macs ikozvino inounza ...
Pindura kuna quhasar
Yekumisikidza Lock nyaya inogona kuve yewebhu kubira